आज सोमबार सौवालको पहिलो दिन: घरघरमै नमाज पाठ गरी इदुल फित्र मनाइँदै – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
काठमाडौं/जेठ १२/अरबी पात्रो हिजरी संवत्अनुसार दशौँ महिना (सौवाल)को पहिलो दिन सोमबार देशभरका मुसलमान समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर इद उल फित्र पर्व मनाउँदैछन् । दशौँ महिनाको पहिलो दिन सोमबार विशेष नमाज पाठ गरेपछि तीन दिनसम्म आफूभन्दा ठूलाबडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिइन्छ । यस पर्वमा आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ । आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवई र खजुरलगायत मीठा खानेकुरा खान दिने चलन छ ।
यस वर्ष गत वैशाख १३ गतेदेखि मुसलमान समुदायको एक महिना लामो व्रत (रोजा) शुरु भएको थियो । एक वर्षभित्र गरेका पाप कटाउन रमजानसमेत भनिने यो व्रत गरिने उहाँले बताउनुभयो । एक महिनासम्म दिनभर व्रत गरेर साँझ सूर्यास्तको नमाज पाठ गरिन्छ । बिहान सूर्योदयअघि र बेलुकी सूर्यास्तपछि मात्र मुसलमानहरुले नवौँ रमजान महिनामा भोजन गर्छन् ।
यस पर्वका अवसरमा मुसलमानहरुले नयाँ कपडा लगाई साथीभाइकहाँ गएर इदको शुभकामना आदानप्रदान गर्छन् । यस वर्ष भने धेरैले घरमै नमाज पाठ गरी परिवारका सदस्यका बीच पर्व मनाउने तयारी गरेका छन् । घरमै नमाज पाठ गरिसकेपछि फोन वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट इद मुवारक भन्दै शुभकामना दिन सकिने धर्मगुरुहरुको आह्वान छ ।
यसैगरी ठूलाबडासँग आशीर्वाद पनि फोन अथवा सामाजिक सञ्जालबाट नै लिन सकिने छ । मुस्लिम आयोगले पनि शनिबार घरघरमै नमाज पाठ गर्न इस्लाम धर्मावलम्बीलाई आह्वान गरेको छ । –रासस
थप ७२ जनामा कोरोना संक्रमण, कूल संक्रमितको संख्या ६७५ पुग्यो।
नक्कली जग्गाधनी खडागरी ३२ बिगाह जग्गा हिनामिना गर्ने सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
अवैध मिर्गौला प्रत्यारोपणस् चिकित्सक, प्रहरी, वडाध्यक्ष लगायतको संलग्नता १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
युवा अभियान्ता सरोजको नेतृत्वमा ६० दिने अभियान: सहिद स्मृती बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा सरसफाइ तथा बृक्षारोपण १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
गृहजिल्ला चितवनबाट प्रचण्डले भने : हामीले मिलेर नयाँ नक्सा बनाएको हो, कोही दलाल‍ र कोही महान् राष्ट्रवादी होइन! १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
मृगौला किनबेचको अबैध धन्दामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल : प्रहरीले गर्यो डाक्टर र जनप्रतिनिधिसहित १२ जनाको नाम सार्वजनिक ! १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
गृह जिल्लामा ब्यस्त प्रचण्ड आज दिनभर पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा । १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
मृगौला प्रत्यारोपणमा कुनैअवैधानिक र गैरकानुनी काम नगरेको कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजको दाबी । १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
पत्रकार अधिकारीले दिए बिहेको भोज गर्ने रकम कोराना कोषमा १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
डेरावालले भाडा नदिँदा कोठाभाडाबाट जीविका चलाउँनेलाई जीविका चलाउन समस्या ! १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
बाढीपहिरोबाट मर्नेको सख्ँया ८८, ३२ बेपत्ता १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१
श्रावण र भाद्र दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’ १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:३१